पाल्पा सिद्धेश्वरको चुनढुङ्गगा खानिमा शंकास्पद वस्तु फेला – KhabarKhurak
पाल्पा सिद्धेश्वरको चुनढुङ्गगा खानिमा शंकास्पद वस्तु फेला
पाल्पा,पुस २९ । रैनादेवि छहरा गाउँपालिका–१ सिद्धेश्वरको चुनढुङ्गगा खानिमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । सिद्धेश्वर मिनरल्स प्रालिले चुनढुङ्गगा उत्खननका लागि प्रयोगमा ल्याएको जेसीवी डोजरमा खतरा लेखीएको शंकास्पद वस्तु फेला परेको हो ।
खानि नजिकै जिल्ला जन परिषद पाल्पा लेखिएको पर्चासमेत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दिपेन्द्र जिसीले जनाउनुभयो । जसमा ४ वटा बुंदासमेत लेखिएको बताइएको छ । पर्चामा सिद्धेश्वर खानिलाई कारबाही किन ? प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन किन ? दर्ता नगरी सञ्चालन, जनताको भावना विपरित सञ्चालन किन ? भनि प्रश्न गरिएको छ ।
बम डिस्पोजको लागि पाल्पा स्थित नेपाली सेनको गोरखदल गणको बम डिस्पोजल टोेली घटनास्थल पुगेको छ । सह सेनानी मेहेश ज्ञवालीको कमाण्डमा टोली खटिइ बम डिस्पोजको तयारी भइरहेको छ । घटनस्थलमा अहिले ठूलो मात्रमा नेपाल प्रहरी, सश्स्त्र प्रहरी र नेपाली सेना खटिएको छ ।
कोरोनाबाट थप ३ को मृत्यु, मृतकको संख्या ७३ पुग्यो
सुनको मूल्य तोलामा आठ सय घट्यो
आज माघ १ गतेः कस्तो छ तपाँईकाे राशिफल ?
कोरोनाबाट थप ३ को मृत्यु, मृतकको संख्या ७३ पुग्यो Saturday, August 8, 2020
बुटवलमा समेत समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण देखियोः स्वास्थ्यकर्मीमा समेत संक्रमण पुष्टि Saturday, August 8, 2020
इण्डो-नेपाल सामाजिक मञ्च परिवार द्वारा स.प्र.ना.उ. शाहीलाई सम्मानपूर्वक विदाई Saturday, August 8, 2020
राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपाल द्वारा सशस्त्र प्रहरी नायब उपरिक्षक शाहीको सम्मानपूर्ण बिदाई Saturday, August 8, 2020
उपत्यकामा ६२ सहित ३७८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४९९ डिस्चार्ज Saturday, August 8, 2020
कोरोनाबारे अपडेट स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको पत्रकार सम्मेलन (लाइभ) Saturday, August 8, 2020
नगरपालिकाका मेयरसहित ५५ जनामा कोरोना पुष्टि Saturday, August 8, 2020
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कपिलवस्तु द्वारा लकडाउन उलंघन गर्ने सवारी साधन नियन्त्रणमा Saturday, August 8, 2020